ACE अवरोधकर्ताहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर खेलहरु प्रेस कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी चेकआउट मनोरञ्जन औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट भारी खेल कल्याण समुदाय स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि जानकारी >> ACE अवरोधकर्ताहरूको सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
ACE अवरोध सूची | ACE अवरोधकहरू के हुन्? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | कसले ACE अवरोध लिन सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
एंजियोटेन्सिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम (ACE) अवरोधकहरू औषधीहरूको वर्ग हुन् जुन सामान्यतया उच्च रक्तचाप, वा उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। रक्तचाप प्रबन्ध स्ट्रोक, मुटु रोग, र मिर्गौला रोग रोकथाम गर्न, अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु संग आवश्यक छ।
उच्च रक्तचापको निदान डरलाग्दो लाग्न सक्छ, विशेष गरी जब उच्च रक्तचापले कुनै लक्षण देखाउँदैन। तपाईलाई हाइपरटेंशन छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ जब सम्म तपाई एक हेल्थकेयर प्रदायकसँग भ्रमण गर्नुहुन्न। लगभग वयस्कहरूको आधा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च रक्तचाप छ, तर, सौभाग्यवश, त्यहाँ यसलाई प्रबन्ध गर्न धेरै औषधीहरू उपलब्ध छन्। ड्रग्सको ACE अवरोधक वर्ग एक उपचार विकल्प हो।
कसरी छिटो तपाइँको पोटेशियम स्तर बढाउन
ACE अवरोधकर्ताहरू, उनीहरूको प्रयोगहरू, र उनीहरूका साइड इफेक्टहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
ACE अवरोधकर्ताहरूको सूची
Aceon (perindopril) 30 per$ प्रति ,$, mg मिलीग्राम ट्याब्लेट पेरिन्डोप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् पेरिन्डोप्रिल विवरणहरू
क्यापोटेन (क्याप्टोप्रिल) 30 per$ प्रति ,$, २ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट क्याप्टोप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् क्यापटोप्रिल विवरणहरू
प्रिनिभिल, जेस्ट्रिल (लिसिनोप्रिल) 30 १33 प्रति ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू Lisinopril कूपन पाउनुहोस् Lisinopril विवरण
वासोटेक (इनालाप्रिल) 30 per० प्रति, 10, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ईन्लाप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् Enalapril विवरण
लोटेंसिन (बेनाजेप्रिल) 30 per$ प्रति ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू बेनाजेप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् Benazepril विवरण
माविक (ट्रेंडोलाप्रिल) 30 per२ प्रति ,०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ट्रान्डोलाप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् ट्रन्डोलाप्रिल विवरण
मोनोप्रिल (फोसिनोप्रिल) 30 per२ प्रति ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू फोसिनोप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् फोसिनोप्रिल विवरण
अल्टेस (रामिप्रिल) 30 per per० प्रति 10 10, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू रामीप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् रामीप्रील विवरण
एकुप्रिल (क्विनाप्रिल) 30 per$ प्रति ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट क्विनाप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् क्विनाप्रिल विवरण
यूनिवास्क (मोएक्सिप्रिल) 30 per० प्रति ,$, १ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट मोएक्सिप्रिल कूपनहरू पाउनुहोस् Moexipril विवरण
ACE अवरोधकहरू के हुन्?
ACE इनहिबिटरहरू औषधीहरूको एक वर्ग हो जसले रक्तचाप कम गर्दछ शिरा र धमनीहरूलाई आराम गरेर। यी औषधीहरूले एंजियोटेंसिन II नामक हर्मोनको उत्पादन रोक्छन्। यो हार्मोन तपाईको रक्त वाहिनिकालाई संकुचित गर्न जिम्मेवार छ, जसले रक्तचाप बढाउन सक्छ। रक्तवाहिनाहरूलाई आराम र रक्तचाप घटाएर, ACE अवरोधकर्ताहरूले रक्त प्रवाह बढाउन र हृदयमा कामको भार कम गर्न मद्दत गर्दछ। यी औषधीहरू प्राय जसलाई उच्च रक्तचाप, मुटुको विफलता, मिर्गौला समस्या, मधुमेह, र रक्त वाहिका र रक्त प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य शर्तहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ।
कसरी ACE अवरोधकर्ताहरूले काम गर्छन्?
ACE अवरोधकर्ताहरूले एंजियोटेंसिन-रूपान्तरण एन्जाइम रोक्दछ, जो एंजियोटेंसिन I लाई एंजियोटेंसिन II मा रूपान्तरण गर्दछ। एन्जियोटेन्सिन २ एक शक्तिशाली हर्मोन हो जसले रक्तनलीको वरिपरि स्नायु मांसपेशीहरू संकुचित गर्दछ, रगत नलीहरू संकुचित हुन्छ र रक्तचाप बढ्छ।
जब एसीई अवरोधकर्ताहरूले एंजियोटेन्सिन २ उत्पादन रोक्छन्, रगत वाहिनाहरू विस्तार गर्न सक्छन् रगत अधिक स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन। ACE अवरोधकर्ताहरूको उपचारले रक्तचाप घटाउन, रक्त नलीको भित्ताहरूमा हुने क्षति कम गर्न र मुटु र मिर्गौलामा रगत प्रवाहलाई बढावा दिन सक्छ। रक्तचाप कम गर्नाले मुटुको विफलतामा मुटुको कार्यमा सुधार र मधुमेह वा उच्च रक्तचापको कारण मिर्गौला रोगको प्रगतिलाई ढिलो गर्न सक्छ।
ACE इनहिबिटरहरू के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
ACE अवरोधकर्ताहरू प्राथमिक रूपमा उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ उच्च रक्तचाप तर निम्न शर्तहरूको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
दीर्घकालीन किडनी रोग
मुटुको विफलता, हार्ट अट्याक, मधुमेह, वा पुरानो किडनी रोग भएकाहरूमा, एसीई अवरोधकहरूलाई रक्तचाप कम गर्ने वा जटिलताको खतरा कम गर्नका लागि पहिलो-लाइन उपचार मानिन्छ। ACE अवरोधकर्ताहरूले एक रक्तचापात्मक प्रभाव पनि गर्छन् उनीहरूको रक्तचाप कम गर्ने क्षमता भन्दा स्वतन्त्र। अर्को शब्दमा, यी औषधीहरूले उच्च रक्तचाप र हृदय रोगले निम्त्याएको क्षतिबाट मुटुको रक्षा गर्न सक्छ।
ACE अवरोधकर्ताहरू अन्य औषधीहरू जस्तै मिलाउन सकिन्छ मूत्रवर्धक वा क्याल्शियम च्यानल ब्लकरहरू।
कसले ACE अवरोध लिन सक्छ?
वयस्कहरूमा उच्च रक्तचापको उपचार गर्नको लागि ACE अवरोधकर्ताहरू सामान्यतया प्रयोग हुन्छन्। एक ACE अवरोधक वयस्कहरूको लागि पहिलो-लाइन थेरापी हो जुन 60० बर्ष भन्दा कम उमेर र गैर अफ्रिकी अमेरिकन हो। ACE अवरोधकर्ताहरू हुन्छन् कम प्रभावकारी अफ्रिकी अमेरिकी जनसंख्या मा। मधुमेह भएका वयस्कहरूलाई डायबेटिक नेफ्रोपेथी वा किडनी रोग जोखिम कम गर्न मधुमेह रोगीहरूमा कम विकसित हुनको लागि एसीई अवरोधक पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरूमा उच्च रक्तचापको उपचार गर्नको लागि ACE अवरोधकर्ताहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरू पनि बच्चाहरूमा मन पर्ने औषधी हुन् जो दीर्घकालीन किडनी रोग वा मधुमेह हो। अफ्रिकी वंशका बच्चाहरूलाई उच्च सुरू खुराक आवश्यक पर्दछ। धेरै ACE अवरोधकर्ताहरू, जस्तै लोटेंसिन र प्रिभिल,6बर्ष र अधिक उमेरका बच्चाहरूका लागि सुरक्षित छन्; जहाँसम्म, केहि सूत्रहरू साना बच्चाहरूका लागि पनि सुरक्षित छन्। उदाहरण को लागी, क्यापोटेन शिशुहरुलाई दिन सकिन्छ, र वासोटेक एक महिना र माथिका बच्चाहरु लाई दिन सकिन्छ।
ठूला वयस्कहरूले सुरक्षित रूपमा ACE इनहिबिटरहरू लिन सक्दछन् तर कम वयस्कहरूको भन्दा सानो डोज आवश्यक पर्दछ। सुरूवात खुराक कम हुन सक्छ र बिस्तारै क्रमशः माथिल्लो तहको इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न।
के ACE अवरोधकर्ताहरू सुरक्षित छन्?
सामान्यतया, ACE अवरोधकर्ताहरू केही गम्भीर साइड इफेक्टको साथ सुरक्षित मानिन्छ जब लिखित रूपमा लिइन्छ। जहाँसम्म, त्यहाँ केहि समूहहरू छन् जुन ACE अवरोध लिने छैन।
गम्भीर किडनी असफलता भएका मानिसहरूले ACE इनहिबिटर लिनु हुँदैन। यदि जनसंख्यामा ACE इनहिबिटर प्रयोग गरिएको छ भने मृगौला समारोहलाई राम्ररी अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ। एक ACE इनहिबिटर लिई पछि एलर्जी प्रतिक्रिया भएका व्यक्तिहरूले गम्भिर खटिरा, सास फेर्न समस्या, वा ओठ, जिब्रो, वा मुखमा सूजनको परिणाम स्वरूप ACE इनहिबिटर लिनु हुँदैन।
केहि ड्रग्सले ACE अवरोधकर्ताहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, over-the-काउन्टर (OTC) Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) ACE अवरोधकर्ताहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ। ACE अवरोधकर्ताहरूको साथ NSAIDs को संयोजनलाई वेवास्ता गर्न वा अनुगमन गरिनु पर्छ। तपाईले लिनुहुने कुनै पनि औषधिहरू जस्तै ओटीसी ड्रग्स, सप्लीमेन्टहरू, र जडिबुटीहरू, एसीई इनहिबिटर लिनु अघि हेल्थकेयर प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
ACE अवरोध सम्झिन्छ
त्यहाँ कुनै वर्तमान ACE अवरोधकर्ता मार्च २०२१ को रूपमा याद गरीरहेको छैन।
ACE अवरोध प्रतिबन्धहरू
यदि कुनै ACE इनहिबिटरसँग तपाइँलाई एलर्जी प्रतिक्रिया भएको छ भने ACE इनहिबिटर लिनुहोस्। यदि तपाईंले कहिल्यै एन्जियोएडेमा अनुभव गर्नुभएको छ (छालामा जस्तै पछाडि सूजन), एसीई अवरोध नगर्नुहोस्।
एन्ट्रेस्टो (सकुबिट्रिल / वालसारटन) लिने बिरामीहरूले नेप्रिलिसिन इनहिबिटर समावेश गर्ने एक औषधि, ACE इनहिबिटर लिनुहुन्न। एन्ट्रेस्टो एक ACE अवरोधकर्तामा स्विच गर्न वा पछि hours of घण्टा भित्र लिनु हुँदैन।
गम्भीर महाधमनी स्टेनोसिस भएका व्यक्तिहरू जसले ACE इनहिबिटर लिइरहेका छन् कम कोरोनरी फ्यूजन कम हुन सक्छ जसको परिणामस्वरूप ईस्केमिया हुन्छ, वा हृदयको मांसपेशीमा रगत प्रवाह कम हुन्छ।
के तपाइँ गर्भवती वा स्तनपानको बेला ACE इनहिबिटर लिन सक्नुहुन्छ?
ACE इनहिबिटर वर्गले ब्ल्याक बक्सलाई गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग बिरूद्ध चेतावनी दिन्छ। ACE अवरोधकर्ताहरूले विकासशील भ्रुणलाई चोट र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। थप रूपमा, ACE अवरोधकर्ताहरूले आमाको दुधमा प्रवेश गर्न सक्दछन् र स्तनपान गर्दा वेवास्ता गर्नुपर्छ। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा ACE इनहिबिटर लिनु अघि उच्च रक्तचापको लागि उपचार विकल्पहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के ACE अवरोधकर्ताहरू नियन्त्रण पदार्थहरू छन्?
होईन, ACE अवरोधकर्ताहरू नियन्त्रणित पदार्थहरू छैनन्।
सामान्य ACE अवरोधक साइड इफेक्ट
ACE अवरोधकर्ताहरूको सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू:
उन्नत रक्त पोटेशियम स्तर
स्वाद को हानि
कम रक्तचाप वा बहिर्गमनको एपिसोडहरू ACE अवरोधकर्ताहरूको पहिलो धेरै खुराकको साथ देखा पर्न सक्दछ। यो व्यक्तिमा अधिक हुन जान्छ जो एक ACE अवरोधकर्ता सुरु गर्दा भोल्यूम-समाप्त हो। फ्लुइड असंतुलनलाई ACE इनहिबिटर सुरू गर्नु अघि सुधार गर्न आवश्यक पर्दछ।ACE अवरोधकर्ताहरूको अधिक गम्भिर तर दुर्लभ दुष्प्रभावहरू:
कम सेतो रक्त कोशिका
जेहुकै दुर्लभ भए पनि ACE अवरोधकर्ताहरूले गम्भीर साइड इफेक्टहरू देखाउन सक्छन्। एउटा प्रतिकूल घटना हो एंजियोएडेमा , वा अनुहार वा शरीरको अन्य भागहरूको छाला मुनि सूजन। ACE अवरोध गर्नेहरूलाई एलर्जी प्रतिक्रिया पनि दुर्लभ तर सम्भव छ। ACE अवरोध गर्नेहरूले मृगौला विफल हुन सक्छ, त्यसैले तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले नियमित रूपमा उपचारको क्रममा तपाईंको मिर्गौलाको कार्य जाँच गर्नु पर्छ।
ACE अवरोधकर्ताहरूले रगत पोटेशियमको स्तर र कारण बढाउन सक्छ हाइपरक्लेमिया (सामान्य भन्दा उच्च पोटेशियम स्तर), त्यसैले एक ACE अवरोध लिने बेला पोटेशियम सेवन निगरानी अक्सर आवश्यक हुन्छ। पोटेशियम सप्लीमेन्टहरू लिनु वा पोटेशियम युक्त नुनको विकल्पहरू प्रयोग गर्दा ACE इनहिबिटरमा हाइपरक्लेमिया हुन सक्छ, जसले अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ र सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने हुन सक्छ। शरीरमा धेरै पोटाशियम भएको संकेतले भ्रम, अनियमित मुटुको धडकन, र झुकाव वा हात वा अनुहारमा सुन्नपन समावेश गर्दछ।
साइड इफेक्टको सूची विस्तृत छैन। हेल्थकेयर प्रोफेशनलसँग बोल्नु भनेको साइड इफेक्टको पूर्ण सूची पाउन र ACE इनहिबिटर लिने उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने उत्तम तरिका हो।
तपाइँको डाक्टरलाई ACE अवरोध लिनु अघि निम्न मध्ये कुनै पनिको बारेमा बताउनुहोस्:
कुनै पनि औषधि एलर्जी
यदि तपाईंले कहिल्यै एन्जियोएडेमा अनुभव गर्नुभएको छ
यदि तपाईलाई मिर्गौला समस्या छ
यदि तपाईंले एक औषधि लिनुभएको छ जुन विगत hours 36 घण्टामा यसमा सकुबिट्रिल छ
यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने
ACE अवरोधकर्ताहरूले कति खर्च गर्छन्?
ACE अवरोध गर्नेहरू सामान्यतया किफायती औषधि हुन् जुन ब्रान्ड-नाम र जेनेरिक सूत्रहरूमा उपलब्ध छन्। लगभग सबै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू ACE अवरोधकर्ताहरूलाई कभर गर्दछ। लागतहरू तपाईंको बीमा योजनामा ​​निर्भर हुन्छ। बीमा बिना, मूल्य निर्धारित औषधी र निर्धारित ट्याब्लेटको मात्रामा भर पर्दछ। यद्यपि,aको प्रयोग गर्दै प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्ड सिंगलकेयरबाट ACE अवरोधकर्ताहरूको लागत कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
LeBron जेम्स कसरत:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
तत्काल हेरचाह बीमा बिना तपाइँ देख्नुहुनेछ
concerta र ritalin एउटै कुरा हो
z पाक ३ दिन बनाम ५ दिन
सामान्य रक्त ग्लुकोज स्तर के हो?
रुघाखोकी लागेपछि के खाने
ptsd कुन उमेर समूहका मानिसहरुमा सबैभन्दा सामान्य छ